Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » ENew York ukuya eMadeira. Inqwelomoya yokuQala ngokuNgqo
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • IPortugal Breaking News • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Iinqwelomoya zeveki phakathi kweNew York (JFK) ukuya eFunchal (FUN) ziya kwenziwa ngeSATA Azores Airlines, inika lula kubahambi abafuna ukuhlola ilitye elifihliweyo laseYurophu.
I-1.SATA Azores Airlines, iya kusungula inqwelomoya yokuqala engapheliyo ukusuka eNew York (JFK) ukuya eFunchal, eMadeira.
2.Akukho zithintelo kwiindwendwe ezigonywe ngokupheleleyo ezivela e-US ukutyelela iZiqithi zaseMadeira.
3. Inqwelo moya ethe ngqo yeveki iya kufumaneka ngoMatshi 2022
Ngomhla wama-29 kuNovemba ka-2021, i-Inovtravel ngentsebenziswano ne-SATA Azores Airlines, iza kuphehlelela inqwelo moya yokuqala engamisiyo isuka kwisango lase-US eliya eFunchal, ikomkhulu laseMadeira. Ngokudityaniswa nenqwelomoya entsha ethe ngqo, esebenza ukusuka eNew York (JFK) ukuya eFunchal (FUN), umqhubi wokhenketho osekwe ePortugal. Inovtravel sele iqalile iiphakheji zokuhamba ezintsha ukuya eMadeira, eya kubandakanya iinqwelomoya eziphuma ngqo eNew York, indawo yokuhlala, ukudluliselwa kwesikhululo seenqwelomoya-hotele kunye nengcali yokuhamba.
IMadeira, ikhonkco lesiqithi elikude nonxweme lwasePortugal, ngokungathandabuzekiyo lilitye elifihliweyo laseYurophu, elinendawo enomtsalane kwiikhilomitha ezingama-300 zeentaba, iintlambo kunye nolwandle, kunye neendawo zokuhlala ezineenkwenkwezi ezintlanu, iindawo zokutyela ezineenkwenkwezi zaseMichelin, kunye neMadeiran ephumelele ibhaso. iwayini. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa ichwebakazi liqhayisa ngobudlelwane obahlukileyo bembali e-US, kunye negama layo lewayini yaseMadeira isetyenziselwa ukwenza i-Declaration of Independence ngo-1776 kwaye uThomas Jefferson kutyholwa ukuba wayalela kufutshane ne-3,500 yeebhotile zewayini yaseMadeira kwiminyaka yakhe yokuqala embalwa. yobumongameli. Ngoku, ngokulungela kokhetho lwenqwelomoya olungamisiyo, le paradesi yasePortugal ifikeleleka ngakumbi kunangaphambili kubakhenkethi base-US.
"Siyavuya ukwamkela inqwelomoya entsha esuka kwisiXeko saseNew York ukuya eMadeira ngoNovemba kwaye sandise ubukho bethu kwimarike yaseMelika," utshilo uNobhala weNgingqi wezoKhenketho kunye neNkcubeko yaseMadeira, uEduardo Jesus. "Ngokhetho olufikelelekayo lwenqwelomoya oluvela kwiindawo ezahlukeneyo zokubalekela e-US, sinomdla wokwamkela abakhenkethi abaninzi base-US kwiinyanga ezizayo kwiparadesi yaseMadeira."
Inqwelo moya ethe ngqo yeveki nganye iya kufumaneka ngoMatshi 2022 kwaye inokubhukishwa ngabahambi nge-Inovtravel.com. Amaxabiso aqala kwi-$1,050 yokuya nokubuya kwizihlalo zoqoqosho kunye ne-$1,880 yokuya nokubuya yezihlalo zeklasi yoshishino, kuquka zonke iirhafu. Iiphakheji zokuhamba ze-Inovtravel ukuya eMadeira ziqala kwi-999 yeedola kuquka neenqwelomoya.
"Injongo yethu kukuqhubeka nokubonelela ngokhetho oluninzi kubakhenkethi base-US abafuna ukubalekela kwiziqithi ezimangalisayo zaseMadeira ngokusebenzisa iindlela ezintsha zokubhabha ezithe ngqo nezifanelekileyo kunye neepakethe ezahlukeneyo zokuhamba ezinokuthi zilungelelaniswe ukuba zilingane phantse naluphi na uhlahlo lwabiwo-mali," utshilo uMseki we-Inovtravel kunye. I-CEO uLuis Nunes.
Iziqithi zaseMadeira zivulelekile kubakhenkethi base-US, akukho zithintelo okanye iimfuno zovavanyo kubahambi abagonywe ngokupheleleyo. Ukuqinisekisa ukhuseleko lwabahlali kunye neendwendwe, bonke abakhweli abahamba besiya eMadeira kufuneka bagcwalise a Ifom ye-intanethi ye-Madeira ekhuselekileyo kwiiyure ezingama-48 ngaphambi kokuhamba. Abahambi abangagonywanga ngokupheleleyo banokuya eMadeira ngovavanyo lwe-PCR olune-COVID-19 oluthathwe kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kokuba bafike, okanye ngokwenza uvavanyo lwe-COVID-19 lwasimahla xa befika. Ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga neemfuno zokungena eMadeira yiya ku Ndwendwela iMadeira.pt.